दलान नेपाल : January 2016
बिहारको मुज्फरपुरमा मधेशी शिर्ष नेताको उपस्थितीमा कार्यक्रम
आन्दोलनरत मधेशी मोर्चाका शिर्ष नेताहरुको सहभागीमा बिहारको मुज्फरपुरमा कार्यक्रम भएको छ । आइतवार भएको उक्त कार्यक्रममा मार्चाका तीन ओटा घटकका अध्यक्षहरु सहभागी थिए भने बिहारको तर्फ वाट सतारुढ गठवन्धनका एक जना शिर्ष नेता रघुवंश प्रसाद सिंह सहभागी थिए । मोर्चाका शिर्ष नेताहरु फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, सदभावना पार्टीका अध्यक्ष अध्यक्ष राजेन्द्र महतो, तराई मधेश सदभावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र यादव सहभागी थिए भने तमलोपाको तर्फवाट उक्त पार्टीका सासंद जगीलाल यादव थिए । जारी मधेश आन्दोलनमा सिमापारीका नागरिकको भुमिका र बिहारका राजनितीक शक्तिहरुले गर्न सक्ने सहयोगको वारेमा पछिल्लो समयमा सिमामा रहेको भारतीय सहरहरुमा कार्यक्रमहरु तीव्र रुपमा हुदै आएका छन । पछिल्लो समयमा तराई मधेशको कसपलवस्तू देखि मोरड सम्मका्े क्षेत्रवाट सहभागी हुने गरी विभिन्न भारतीय सहरहरुमा कार्यक्रमहरु सम्पन्न भइसकेका छन । बिहारको सतारुढ गठवन्धनका एक जना शिर्ष तथा प्रभावशाली नेता रघुवंश प्रसाद सिह उक्त सवै कार्यक्रमहरुमा सहभागी हुदै जारी मधेश आन्दोलनको पक्षमा बोल्दै आएका छन ।
ठाकुर दिल्लीवाट फर्के पश्चात मोर्चाको आन्तरिक छलफल तीव्र
शुक्रवार विहान रक्सौल नाकावाट ५ ओटा मालवाहक टक भित्रिए पछि पुर्न प्रर्दशनमा उत्रेका मधेशी आन्दोलनकारीहरु
विहिवार राती तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर दिल्लीवाट फर्केए पछि मोर्चाको अगामी वैठक र रणनिती वारेमा आन्तरिक छलफलहरु तीव्र भएको छ । ठाकुरले आज तराई मधेशका जिल्लाहरुमा रहेका सदभावा अध्यक्ष राजेन्द्र महतो र फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसंग फोनमा सवाद गरेर मोर्चाको अगामी वैठक वारेमा कुराकानी गरेका छन भने काठमाडौमै रहेका आफना दोस्रो तहका नेताहरु संग यो विचको घटनाक्रमको वारेमा जानकारी लिएका छन । साथै आज ठाकुर संगकै कुराकानी पश्चात मोर्चाका कार्यसम्पादन समितीको समेत बैठक बस्यो । कार्य सम्पादन समितीलाई अहिले सम्मको आन्दोलनकमे सुक्ष्म विश्लेषण गर्दै सवै पक्षको यर्थात अवस्था वारेमा मोर्चाको अगामी वैठामा प्रस्तुत गर्न समेत भनिएको छ । ठाकुर निकटस्त स्रोतका अनुसार अगामी मोर्चाको बैठकले गएको साढे महिना देखि जारी मधेश आन्दा्लनको सवै पक्षको गम्भिरता पुर्वक समिकक्षा गर्ने छ । ठाकुरले आज संवाद गरेको मोर्चाका अन्य शिर्ष नेताहरु मध्ये फोरम नेपालका अध्यक्ष यादवले आफु १८ गते मात्रै काठमाडौ आइपुग्ने वताएका थिए । यादवले आफु सिरहामा रहेको र याहा वाट विरगंज जान लागेको भन्दै विरगंज वाट काठमाडौ फर्किने बताएका थिए । त्यसैगरी सदभावना अध्यक्ष महतोले मोर्चाको अगामी वैठक विराटनगरमै गर्न सुझाएका थिए । महताले आफनो आखामा समस्या आएको र १९ गते अपरेशनका लागी डाक्टरहरुले भनेका कारण विराटनगरमा हुदा आफुलाई सजिलो हुने बताएका थिए ।
मधेशका जिल्लाहरुमा संशोधन विद्येयक जलाइदै । मोर्चाद्धारा थप आन्दालनको कार्यक्रमहरु सार्वजनिक ।
मधेशमा संविद्यान संशोधनको पहिलो विदेयक जलाउदै आन्दोलनकारीहरु
गएको शनिवार प्रमुख दलहरुले मोर्चाको बेवास्ता गर्दै गरेको पहिलो संविद्यान संशोधनलाई मोर्चाले अपुरो भन्दै अमान्य हुने प्रष्ट पारेका छन । मोर्चाको शिर्ष नेताहरु काठमाडौ वाहिर रहेकाले मोर्चाका दोस्रो तहका नेताहरुको आज बसेको बैठकले हालै संविद्यानमा भएको पहिलो संशोधनले आफुहरुको आन्दोलनलाई सम्बोधन नगरेको भन्दै जारी आन्दोलन यथावत रहेको जनाएको छ । साथै मोर्चाले अउदो १८ माघ सम्मका लागी नयां विरोधका कार्यक्रमहरु समेत सार्वजनिक गरेका छन । मोर्चाले १८ माघ सम्मका लागी घोषणा गरेको कार्यक्रमहरुमा मैनवती जुलुस सहित दिप प्रज्वलनको साथै क्षेत्र स्तरको सभाहरु र मधेशका वौद्धिक समुदायहरु संगको अन्र्तक्रियाहरु छन ।
रंगेली घटना पश्चात तराई मधेशमा चर्केको प्रर्दशन कायमै छन ।
प्रमुख दलहरुले आन्दोलनरत मधेशी मोर्चाको सहमती वेगर संविद्यान संशोधन गरे पछि उत्पन्न परिस्थती वारेमा मधेशी मोर्चा आन्तरिक छलफलहरु विभिन्न तहमा सुरु गरेका छन । आन्तरिक छलफल र गृहकार्य कै कारण मोर्चाको बैठक तत्कालै तीन चार नबस्ने समेत मोर्चाका नेताहरुले बताएका छन । आज देखि मोर्चाको दोस्रो तहका नेताहरुले विभिन्न तहमा अगामी आन्दोलनको रणनिती वारेमा छलफलहरु सुरु गरेका छन । प्रमुख दलहरुले हिजो राती गरेको २ बुदे संविद्यान संशोधनले मधेश आन्दोलनको मुद्धाहरुलाई समबोधन नगर्ने भन्दै मोर्चाले त्यसलाइ अस्विकार गर्नै जनाएका छन । त्यही भएर मोर्चाले लिने अगामी रणनीती वारेमा सर्वत्र चासो समेत देखिन्छ । तर मोर्चाका सवै शिर्ष नेताहरु काठमाडौ वाहिर भएकाले र अगामी रणनीती वारेमा केहि आन्तरिक गृहकार्यको समेत खाचो देखिएकाले मोर्चा केहि दिनमा त्यसमा व्यवस्त हुनेछन । पछिल्लो समयमा मोर्चाका शिर्ष नेताहरु मध्ये तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर दिल्लीमा छन भने, सदभावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतो विराटनगरक्षेत्रमा छन । त्यसैगरी पछिल्लो केहि दिन यता पार्टीको केन्द्रिय कार्यसमितीको बैठकमा व्यवस्त रहेको फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव आज बैठक सकाए पनि उनी भोली विराटनगर जाने कार्यक्रम छन । तमसपाका अध्यक्ष महेन्द्र यादव पनि उपचारकै सिलसिलामा भारतमै छन । मोर्चा स्रोतका अनुसार मोर्चाको अगामी बैठक केहि दिन पर धकेल्ने भएका छन । यद्यपी जारी आन्दोलनका कार्यक्रमहरु यथावत छन । स्थानिय तहहरुमा आफनो ढगले विरोधका कार्यक्रमहरु जारी नै छन र केन्द्रिय स्तरमा मोर्चाले अगामी रणनीती वारेमा केहि ठोस तयारीमा जुटीरहेको बुझिएको छ ।
जनकपुरमा प्रर्दशन गर्दै युवा आन्दोलनकारी
विहिवार मोरडको रंगेलीमा भएको घटना पश्चात तराई मधेशको पुर्व देखि पश्चिम सम्म फेरी तनावको वातावरण सिर्जना भएको छ । पछिल्लो समयमा समान्यीकरण बन्दै गएको तराई मधेशको अवस्था रंगेली घटना लगतै तनावमा परिणत भएको छ भने आन्दोलनहरु ठाउ ठाउमा चर्किएको छ । विहिवार रंगेलीमा एमाले सम्बद्ध युवा संगठनले आयोजना गरेको कार्यक्रमको प्रतिरोधमा उत्रेका मधेशी आन्दोलनकारीहरु प्रहरी र युवा संघ दुवैको वल प्रयोगवाट ठुलो क्षती व्योहोरेका छन । रंगेलीमा प्रहरीले चलाएको गोली वाट तीन जनाको मृत्यू भइसकेको छ भने झण्डै चार दर्जन धाइतेहरुको उपचार भईरहेको छ । त्यसैगरी युवा संघका नेताहरुले प्रहार गरेको धारिलो हतियारवाट विराटनगरमा धाइते भएका सदभावनाका प्रवक्ता संतोष मेहता सहितका कयौन अन्य नेताहरुको समेत उपचारार्थ छन ।
मोरडको रंगेलीमा दोहोरो हिंसात्मक झडप । अवस्था तनावपुर्ण ।
रंगेली घटनाको मृतकलाई प्रहरीले लगदै । फोटो -अनलाईन खवर
मोरडको रंगेलीमा प्रर्दशनकारी र प्रहरी विच भएको दोहोरो झडप पश्चात अत्यन्तै तनावपुर्ण बन्दै गएको स्थानिय अधिकारीहरुले जनाएका छन । अवस्था तानवपुर्ण बन्दै गए पछि स्थानिय प्रशासनले त्यस क्षेत्रमा क्फुर्य लगाएका छन । विहिवार दिउसो भएको प्रहरी संगको झडपमा साझ सम्ममा तीन जना प्रर्दशाकारीहरुको मृत्यु भइसकेको प्रहरी अधिकारीहरुले पुष्टि गरेका छन । मधेशी मोर्चाले प्रहरीको गोली वाट धाइते भएका अन्य तीन जनाको अवस्था अत्यन्तै नाजुक रहेको जनाएको छ । मोर्चाले जनाए अनुसार प्रहरीको गोली लागी अन्य ८ जना पनि गम्भिर धाइते भएका छन भन्ने जम्मा धाइतेको संख्या ३५ जना भन्दा वढी रहेको मोर्चाको दावी छ । धाइतेहरुको उपचार विराटनगर स्थित विभिन्न अस्पतालहरुमा भईरहेको छ । विहिवार मोरडको रंगेलीमा एमाले सम्बद्ध युवा संघले कार्यक्रम गर्ने भए पछि मोर्चाले हिजो देखि नै त्यसलाई लक्षित गरेर विरोध प्रर्दशनहरु गर्दै आएका थिए । हिजो पनि प्रहरी संग मोर्चाका आन्दोलनकारीहरुको दोहोरो झडप भएको थियो ।
वार्ता अवरुद्ध भएको घोषणा संगै मधेशमा फेरी चर्कदै आन्दोलन ।
सरकारी पक्षसंगको वार्ता साकारात्मक नभएको भन्दै मोर्चाले कार्यदलीय स्तरमा अब वार्ता नहनु बताए सगै मधेशका जिल्लहरुमा प्रर्दशनहरु फेरी चर्कन थालेका छन । पछिल्लो समयमा मधेशका जिल्लाहरुमा बजारहरु खुल्न थालेका थिए भए स्थानिय स्तरमा यातायातहरु संचालनमा आउन थालेका थिए । तर सोमवार राती प्रमुख दलहरु र मोर्चाको कार्यदल स्तरमा वार्ता भंग भएपछि मधेशमा फेरी तनावको वातावरणहरु देखिन थालेका छन । विरगंज, गौर, मंलगवा, लहान, राजविराज, विराटनगर सहितका सहरुमा प्रर्दशनहरु भएका छन भने कतिपय ठाउहरुमा फेरी बजारहरु बन्द गराउने क्रम सुरु भएको छ । मोरडको रंगेलीमा आज दिनभर नै मोर्चाको प्रर्दशनका कारण अवस्था तनावपुर्ण बनेको थियो ।
मोर्चा कार्यदलद्धारा वार्ताको औचित्य सकिएको भन्दै छलफल वहिष्कार ।
निर्णयक भनिएको प्रमुख दलहरु र मधेशी मोर्चाको सोमवारको वैठक मोर्चाको कार्यदलले वहिष्कार गर्दै अव वार्तामा नआउने चेतावनी दिएका छन । आइतवार कार्यदल स्तरमा भएको वार्तामा प्रमुख दलहरुको कार्यदलले शिर्ष नेताहरु संग छलफल गरेर सोमवार टुग्याउने भनेका थिए । मोर्चा र प्रमुख दलहरुको कार्यदल स्तरको वार्ता सुरु हुनु पर्व आज साझ प्रमुख दलहरुको शिर्ष नेताहरुको बैठक बसेको थियो । उक्त बैठक विना निष्कर्ष सक्दै भोली फेरी छलफल गरेर बैठक गर्ने निष्कर्ष निकालेका थिए । प्रमुख दलहरुको शिर्ष नेताहरुको बैठक सके वितिकै वालुवाटारमै कार्यदल स्तरको वैठक सुरु भएको थियो । कार्यदलको बैठकमा प्रमुख दलहरुको कार्यदल सदस्यले आज शिर्ष बैठक वारेमा बिफ्रिगं गरेका थिए । त्यसलगतै मोर्चाका कार्यदल सदस्यहरुले त्यसो भए अव उपरान्त आफुहरु वार्ताका लागी नआउने भन्दै त्याहावाट हिडेका थिए । मोर्चाका कार्यदल सदस्य लक्ष्मणलाल कर्ण भन्छन, कार्यदल स्तरको बैठककको अव औचित्य समाप्त भइसकेको हाम्रो निष्कर्ष छ । कर्ण भन्छन, प्रमुख दलहरुका कार्यदल सदस्यहरुले जहिले पनि शिर्ष नेताहरु संगको छलफल पछि यसो गर्ने उसो गर्ने भन्दै समय काटन थालेको हाम्रो बुझाइ छ, कर्ण भन्छन, त्यसो भए हामीले उहाहरुलाई प्रष्ट रुपमा आज भनेर आएका छौ, उसो भए अव शिर्ष तहमै छलफल वा वार्ता गर्नु होला ।
किन फेरी विग्रदै छन कुरा ।
गएको पाच महिना देखि आन्दोलनरत मधेशी मोर्चा र प्रमुख दलहरु विच अन्नतह सहमती नजिक पुगेको मोर्चा सम्बद्ध नेताहरुले बताएका छन । अनौपचारिक तथा औपचारिकतहमा पछिल्लो समयमा धनिभुत भएको छलफल निष्कर्ष उन्मुख रहेका र सहमतीय खाका भोली सम्म टुगो लगाउने अन्तिम कसरत चलीरहेको नेताहरुले बताएका छन । आज दिउसो ३ बजे पछि मोर्चा र प्रमुख दलहरुको कार्यदल विच झण्डै पांच घण्टा सम्म चलेको बैठकले धेरै कुराको टुगो लगाइसकेका छन । आजको बैठकमा प्रमुख तीन दलले मोर्चाले अघि सार्दै आएको संघियताको सिमाकंन हेरफेर गर्नका लागी बनाइने समितीको टोओआर प्रस्तुत गरेको मोर्चाको नेताहरुले बताएका छन । संघियता वाहेक अन्य विषयमा प्रमुख दलहरु र मोर्चा यस अघि नै एक प्रकारको सहमतीय खाका नजिक पुगीसकेका थिए । मोर्चा कार्यदलका नेता हृदेश त्रिपाठी भन्छन, प्रमुख दलहरुले आजको ल्याएको सिमाकंन समितीको टिओआरमा हामीले केहि करेक्सन गर्न भनेका छौ, उहाहरुले त्यसलाई भोली ल्याउने कुरा गर्नु भएको छ । भोली नै सहमतीमा चाही हस्ताक्षर भइहाल्छ भन्ने होइन तर उहाहरु आज भएको छलफल अनरुप आउनु भयो भन्ने सहमतीय खाकाको लगभग अन्तिम टुगो लाग्न सक्ने सम्भावना रहेको त्रिपाठीले बताए । मोर्चाको कार्यदलमा आफनो प्रतिनिधी नदिएको मोर्चाका एक घटक सदभावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मण लाल कर्ण समेत आजको कार्यदल बैठकमा सहभागी भएका थिए । कर्ण भन्छन, संघियता सहित हामीले प्रस्तुत गरेको ११ ओटै बुदाहरु माथी निष्कर्ष उन्मुख छलफलहरु चाही अघि वढेको छ । एक दुई दिन भित्रै टुगो लाग्ने सम्भावना अत्यद्यिक छ । प्रमुख दलहरु र मोर्चाको विचमा विषयगत रुपमा भईरहेको छलफलवारेमा यस अघि नै सार्वजनिक टिप्पणी नगर्ने सहमती भएकाले नेताहरुले प्रमुख दलहरुले के ल्याएको र त्यसमा मोर्चाले थप के गर्न भनेर आज भनेका छन भन्ने वारेमा मुख खोलेका छैन । त्रिपाठी र कर्ण दुवैले त्यसवारेमा भने, त्यो अहिले नभनौ, पक्ष र विपक्षमा त्यसमा मत सिर्जना गरे पछि वार्तामा बस्नेलाई अप्ठायारो हुन्छ । कार्यदलको बैठक भोली २ बजे फेरी बस्दै छन ।
त्रिकोणात्मक चक्रव्युहमा सहमतीय सम्भावना ।
at 12:21 AM Posted by Dalan
विहिवार प्रमुख तीन दलको शिर्ष तहको बैठकले आउदो ५ गते सम्ममा मधेशी मोर्चा संग सहमती गर्ने निर्णय गरेका छन । त्यही अनुसार आज मोर्चा र प्रमुख दलहरु विचको कार्यदल स्तरमा फेरी छलफल हुदै छन । अघिल्लो हप्ता देखि कार्यदल स्तरमा भइरहेको छलफलहरुलाई अहिले सम्म दुवै पक्षले साकारात्मक भएको भन्दै आएका छन । कतिपय नेताहरुका अनुसार आन्दोलनरत मधेशी मोर्चा काग्रेसले पेश गरेको संशोधन प्रस्तावलाई थप परिमार्जन सहित स्विकार गर्ने र प्रमुख दलहरुले संघियताका लागी भन्दै आएको राजनिती समितीलाई मान्न तयार भए पछि पछिल्लो चरणहरु सहमती नजिक पुगेका छन । विहिवारको प्रमुख दलहरुको वैठकले त्यही भएर होला मोर्चाले भन्दै आएको उक्त राजनितीक समितीलाई वैद्यानिता दिने निर्णग गरेका हुन । त्यसो भए के प्रमुख दलहरुले गरेको निर्णय अनुसार आन्दोलनरत मोर्चा संग यो हप्ताको मंगलवार सम्ममा सहमती होला त ?
अघिल्लो हप्ता देखि कार्यदल स्तरमा सुरु भएको छलफल आज फेरी भयो । हिजो नै बोलाइएको बैठक सतापक्षको नेताहरुको व्यवस्तताका कारण हुन सकेका थिएन । आज दिउसो बसेको बैठक पर्सी बस्ने गरी फेरी सकिएको छ । नेताहरुले वार्ता साकारात्मक रुपमा अघि वढेको बताउदै आएका छन । कतिपय भित्रियाहरुका अनुसार काग्रेसले पेश गरेको संशोधन प्रस्ताव मोर्चाको सहमतीमा अघि वढाउदै सिमाकंनका लागी कार्यदल बनाएर अघि वढने अन्तिम कसरतमा दुवै पक्ष अघि वढन खोजेको देखिन्छ । सिमाकंनका लागी बनाइने भनिएको समितीको वैद्यता मोर्चाले खोज्दै त्यसको टिओआर प्रष्ट रुपमा बनाउन माग गरेका छन । कार्यदल सदस्य तथा तमलोपा नेता हृदेश त्रिपाठी भन्छन, हामीले उक्त समितीले काम गर्ने वारेको विश्वसिनयता खोजीरहेका छौ । त्रिपाठी भन्छन, हामीले आफनो तर्फवाट त्यसका लागी प्रस्ताव गरिसकेका छौ । उनी भन्छन, हामी आन्दोलनकारीहरुले विश्वासको वातावरण मात्रै खाजेका छौ, त्यो उहाहरुले गर्नु पर्ने हुन्छ । त्रिपाठीका अनुसार प्रमुख दलहरुको कार्यदलले पर्सी गम्भिरतापुर्वक गृहकार्यका साथ आएको खण्डमा सहमती फ्रेमबर्क अगाडी वढने सम्भावना छ । मोर्चाले सिमाकंनका लागी बन्ने समितीको टिओआरका लागी के प्रस्ताव गरेको छ भन्ने कुरा अहिले गोप्य राखिएको छ । त्रिपाठी भन्छन, अहिले भन्दा पक्ष वा विपक्षमा मत वाझिने भएकाले हामी दुवै पक्षले त्यसमा गोप्य नै राख्ने समझदारी गरेका छौ । मोर्चावृतमा रहेको चर्चा अनुसार मोर्चाले समितीको टिओआरमा राज्यपुर्नसंरचना समिती वा आयोगले सिफरिस गरेको अनुसार मधेशमा दुइ प्रदेशको सुनिश्चितता अथवा हाल विवादित देखिएको झापा, मोरड, सुनसरीको तल्लो भाग दुइ नम्बर प्रदेशमा र पश्चिमको कैलालीको थरुहट भाग ५ नम्बर प्रदेशमा गाभ्ने उल्लेख गर्न माग गरेका छन । तमलोपा नेता तथा कार्यदल सदस्य त्रिपाठीले आफुहरुले सिमांकनका लागी बन्ने समितीले भोली गर्ने कामको विश्वासिलो आधार प्रमुख दलहरुवाट खोजेको उल्लेख गरे । त्रिपाठी भन्छन, यो वा त्यो भन्ने कुरा अहिले नै नभनौ ।
मोर्चा बैठकमा कार्यदलको रिर्पोटिंग - धेरै साकारात्मक नहोउ
हालै प्रमुख दलहरु र मोर्चाले वार्ताको लागी कार्यदल बनाएर पछि उक्त कार्यदलले हिजो देखि जारी मधेश आन्दोलनको सम्बोधन वारेमा छलफल सुरु गरेका छन । कार्यदलले आज मधेशी मोर्चाको बैठक बस्ने भए पछि कतिपयले त्यसलाई लक्षित गरेर छलफल सुरु वढाएको बताएका थिए । हिजो साझ र आज विहान गरी दुई पटक भएको कार्यदल स्तरको छलफलहरु वारेमा आज बसेको आन्दोलनरत मोर्चाको बैठकमा त्यस वारेमा रिर्पोटिंग भयो । कार्यदल स्तरको छलफलको वारेमा बैठकमा तमलोपा नेता हृदेश त्रिपाठीले रिर्पोटिंग गरेका थिए । बैठक स्रोतका अनुसार त्रिपाठीले हिजो र आज प्रमुख तीन दलविच भएको छलफल वाट उत्साहित हुने अवस्था नरहेको निष्कर्ष सुनाएका थिए । बैठक स्रोत भन्छन, काग्रेस केहि साकारात्मक देखिए पनि विश्वासिलो आधार उसले पनि दिन नसकेको, एमाले आफनो पुरानै अडानमा र एमाअओवादी दाहोरो अवस्थामा देखिएको त्रिपाठीले बताएका थिए । कार्यदल स्तरमा भएको छलफलमा आज विहान मात्रै काग्रेसको तर्फवाट संघियताका लागी तीन महिना आयोगको प्रस्ताव आएको थियो । त्रिपाठीले कार्यदलमा हिजो र आज भएको छलफलमा विगतमा भएको अनौपचारिक कुराकानीहरु भन्दा भिन्न केहि नरहेको प्रष्टाएका थिए ।
आन्दोलनको समिकक्षा हुदै ।
प्रमुख तीन दलको आग्रहलाई अस्विकार गर्दै आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा आफनो तर्फवाट छुटै कार्यदल बनाएको घोषणा गरेको छ । गएको आइतवार प्रमुख तीन सहित मोर्चाको बैठकमा प्रमुख दलहरुले आन्दोलनको मागलाई सम्बोधन गर्नका लागी संयुक्त कार्यदल बनाउने प्रस्ताव गरेका थिए । प्रमुख दलहरुले आफनो तर्फवाट उक्त कार्यदलमा सहभागी हुनेहरुको नाम सहित बैठकमा उपस्थिती भएर मोर्चालाई त्यसमा सहभागी हुने नेताहरुको नाम मागेका थिए । मोर्चाले बैठकमा आफुहरु पछि छलफल गरेर यसवारेमा निर्णय गर्ने जनाएका थिए । त्यस पछि मोर्चाको दुई दिन देखि लगातार भएको अनौपचारिक छलफलको आधारमा प्रमुख दलहरुको कार्यदलमा नबस्ने निष्कर्ष निकाल्दै वरु उक्त कार्यदलसग संवाद गर्न आफनो तर्फवाट तीन सदस्यीय कार्यदलको घोषणा गरेका छन । मंगलवार काठमाडौ स्थित तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीको कार्यलयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर मोर्चाले आफनो तीन सदस्यीय कार्यदलको घोषणा गरेका थिए । पत्रकार सम्मेलनमा उपल्बध गराइएको विज्ञप्तिमा मोर्चाको तर्फवाट तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले हस्ताक्षर गरेको विज्ञिप्तमा तमलोपा नेता हृदेश त्रिपाठी, फोरम नेपालका राजेन्द्र श्रेष्ठ र तमसपाका रामनरेश राय सहभागी रहेको रहेको तीन सदस्यीय कार्यदल बनाएको उल्लेख गरिएको छ ।
गएको बैशाख ३ मा सदभावना पार्टीले स्थापनाको २५ औ बर्षगाठ मनाएका थिए ।
टुक्रा टुक्रामा विभाजित रहेको तराइ मधेशको पुरानो पार्टी सदभावनाका सवै पक्षहरुको विचको एकिकरणका लागी दिल्लीमा गृहकार्यहरु थालिएको छ । जारी आन्दोलनको क्रममा ११ पुषमा प्रहरीको आक्रमणमा परी धाइते भएका राजेन्द्र महतो उपचारका लागी गएको शुक्रवार दिल्ली गएका थिए । महतोको उपचारमा दिल्लीमा भईरहदा यसैलाई निहू बनाएर टुक्रा टुक्रामा विभाजित सदभावना पार्टीहरुको एकिकरणको पहल थालिएको बुझिएको छ । यही विषयमा छलफल गर्न नेपाल सदभावना पार्टीका अध्यक्ष अनिल कुमार झा पनि हिजो साझ दिल्ली पुगेका छन । झा आज विहानै मात्रै महतो उपचारार्थ अस्पताल पुगेर उनीसंग भेटेका थिए । तर दिल्ली स्थित उच्च स्रोतहरुका अनुसार टुक्रा टुक्रामा विभाजित भएर कमजोर देखिएका मधेशी पार्टीहरुलाई भारतीय पक्षले वारम्वर एकताबद्ध हुन आग्रह गर्दै आएका थिए । गएको दोस्रो संविद्यानसभाको निर्वाचनमा सवै मधेशी पार्टीहरुको विचको एकता प्रयासले खुवै चर्चा पाएको थियो । तर नेतृत्व विवादका कारण हुन सकेन ।
मोर्चा र प्रमुख तीन दलको बैठक फेरी निष्कर्ष विहिन
कसरी बस्यो आइतवारको वालुवाटार सर्वपक्षिय बैठक ।
लामो समय देखि अवरुद्ध प्रमुख तीन दल र आन्दोलनरत मोर्चाको बैठक आइतवार भए पनि कुनै निष्कर्ष उन्मुख नदेखिएको नेताहरुले बताएका छन । लामो अन्तराल पछि सवै पक्षको बैठकमा सरकारी पक्षले फेरी पुन पुरानै रोडम्याप दोह्याएको मोर्चाका नेताहरुले बताएका छन । बैठकमा सहभागी तमसपाका नेता राम नरेश राय भन्छन, उहाहरु फेरी पुरानै कुरा गर्नु भयो, काग्रेस संशोधन विद्येयक पास गर्ने र संघियताको सन्दर्भमा तीन महिना राजनितीक आयोग बनाएर अघि वढौ । राय भन्छन, उहाहरुले पुरानै कुरा भने पछि हामीले पनि आफनो पुरानै अडान दोहउदै बैठक सकाएर फर्केका छौ । रायले भने, हाम्रो तर्फवाट ठाकुरजीले ११ बुदेको ठोस जवाफ मागे पछि उहाहरुले अमुर्त रुपमा कार्यदल बनाउन भन्नु भयो तर मुद्धाहरुको वारेमा कुनै ठोस कुरा राख्नु भएन । गएको साढे चार महिना देखि आन्दोलनरत मधेशी मोर्चाले संघियता सहितको आफुहरुको ११ बुदे मागको प्याकेजमै सम्बोधन हुनु पर्ने अडान दोह्याउदै आएका छन । उता सरकारी पक्षले संघियताको सन्दर्भमा पछि मिलाउने भन्दै राजनितीक समिती बनाएर अघि वढन भनिरहेको छ । मोर्चाका नेताहरुले प्रमुख दलहरुले पछि नगर्ने भन्दै त्यसको आधारमा विश्वास नगर्ने बताउछन ।
आइतवार मोर्चा बैठकको तस्बीर
गएको आइतवार आन्दालनरत मधेशी मोर्चाको बैठकको दृश्य अली फरक देखिए । शनिवार सदभावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतो माथी विराटनगर जोगवनी नाकामा आक्रमण भए पछि आइतवारको बैठक बसेको थियो । साझ ५ बजे सिंहदरवार स्थित फोरम नेपालको संसदीय दलको कार्यलयमा भएको उक्त बैठकमा फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, तमलोपावाट अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, नेताहरु हृदेश त्रिपाठी, वृषेशचन्द्र लाल र सुरेन्द्र झा तथा तमसपावाट महेन्द्र यादव, राम नरेश राय र सदभावना पार्टी वाट नरसिंह चौधरी र मनिष सुमन सहभागी सहभागी थिए । उक्त बैठक आफनो अधयक्ष माथी आक्रमण भए पछि सदभावनाको आग्रहमा बोलाइएको थियो । बैठकका सुरुमा फोरम नेपालको अध्यक्ष यपेन्द्र यादवले वोल्ने मौका पाए । उपेन्द्र आफनो भनाई अस्पतालमा उपचारार्थ राजेन्द्र महतोको आलोचना वार सुरु गरे । उनले भने, राजेन्द्र महतोजी आफनै कारण आफु पनि समस्यामा पर्नु हुन्छ अनि मोर्चालाई पनि बदनाम गराउनु हुन्छ । यादवले महतो किन र कुन कार्यक्रम अन्र्तगत विराटनगर नाकामा धर्ना दिन ग एभनेर प्रतिप्रश्न समेत गरे ? मोर्चामा त्यस्तो कुनै सल्लाह नै हुदै अनि वाहा आफनै तालले हिडनु हुन्छ, यादवको तर्क थियो । यादवलेमहतोको उपस्थितीमा आमसभा आयोजना गरिएको जानकारी आफुले पाएकाृ तर उहा त्याहा नगइकन नाकामा किन धर्ना दिन जानु भयो त्यो बुझिनसक्नु भएको भन्दै आलोचना गरे । यादव पछि तमसपाका नेता राम नरेश रायको पालो आएको थियो । तमसपाका नेता रायले पनि सदभावना अध्यक्ष महतोको आलोचनामै आफना कुराहरु टुग्याए । रायले फोरम नेपालका अध्यक्ष यादवकै भनाई लाई हो मा हो भन्दै आफना कुराहरु राखे ।
जब सुमनले महन्थ र उपेन्द्र माथी औला उठाए......